VaNkosana Moyo Vanoti Vane Muitiro Mutsva muNyaya dzeMatongerwo eNyika
Chikunguru 21, 2017
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva rinopikisa reAlliance for People’s Agenda, APA, Doctor Nkosana Moyo, vanoti bato ravo harisi kuzopa vatsigiri varo zvipfeko zvebato ravo sezvo izvi zvichivaisa pamhene munyaya dzemhirizhonga dzezvematongerwo enyika.
Doctor Moyo vanotiwo vane nzira itsva yavachashandisa mukutsvaga vanhu vachavavhotera yakasiyana neiri kushandiswa nemamwe mapato, yakaita sekuita misangano nevanhu vakawanda.
Doctor Moyo, avo vakatiza muhurumende yaVaMugabe muna 2001 vachiti havakwanisi kushanda nevanhu vanoita zvehuori, vanotiwo bato ravo harisi kuzopinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa, vachiti vane maonero akasiyana nemamwe mapato anopikisa, uye mbeva zhinji hadzina mashe.
Pavakaita musangano nevatori venhau masvondo mashoma apfuura, VaMoyo vakati vakanga vasingadi kushanda nemamwe mapato sezvo kuita izvi kwaive kwakafanana nekusanganisa mvura nemafuta (oil), izvo zvakaonekwa nevakawanda sekudada.
Hurukuro naVaNkosana Moyo